Federico Moccia: buugaag | Suugaanta Hadda
Encarni Arcoya | 14/10/2021 08:09 | Buugaag
Isha sawirka buugaagta Federico Moccia: Pinterest
Ka hadal Federico Moccia buugaagtiisuna waa inay ka sameeyaan qoraa hormuud u ahaa iibinta sheekooyinka dhallinta. Dhab ahaantii, waxaa la sheegaa inay ku mahadsan tahay sheekooyinkooda in nooca weyn ee dhalinyarada ah uu soo baxay, mawduucyada dadka waaweyn laakiin loo sheegay hab ay dhallinyaradu laftoodu uga warqabeen si “jilicsan”.
Muddo sanado ah, Federico Moccia wuxuu caan ku noqday magacyada dadka waaweyn, mar kasta oo uu buug soo saarayna wuxuu ahaa guul, ma aha oo kaliya waddankiisa, laakiin adduunka intiisa badan. Laakiin waa maxay buugaagta ay leedahay Moccia? Waa maxay sheekada ka dambaysa qoraagan? Hoos ka ogow wax walba.
1 Waa kuma Federico Moccia
2 Buugaagta Federico Moccia
2.1 Saga Saddex mitir oo cirka ka sarreeya
2.2 Saga Waan ka xumahay haddii aan kuugu yeero jacayl
2.3 Saga Caawa ii sheeg inaad i jeceshahay
2.4 Saga Xilligaas farxadda
2.5 Riwaayado madax-bannaan
Waa kuma Federico Moccia
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato Federico Moccia ayaa ah in jaceylkiisa dhabta ah, kahor inta aysan suugaanta gelin noloshiisa, ay ahayd telefishan iyo shineemo. Mana aha wax ka yar, haddii aan tixgelinno in aabbihiis yahay Giuseppe Moccia, Pipolo, filim iyo qoraa shaashadda telefishanka, siyaasi iyo agaasime aflaam badan iyo bandhigyo TV.
Dhammaan wuxuu ku noolaa carruurnimadiisii ​​oo ay hareereeyeen shineemo in aabbihii isaga ku beeray oo tusay, sidaa darteed, markii uu ku filnaaday inuu shaqeeyo, wuxuu doortay inuu noqdo qoraa shaashadaha majaajillada Talyaaniga. Gaar ahaan, waxaad ka heli kartaa tixraacyo isaga filimada laga soo bilaabo 70 -meeyadii iyo 80 -meeyadii.
Wuxuu bilaabay inuu kaaliye u noqdo agaasimaha Attila flagello di Dio, oo ah filim aabihiis.
Si kastaba ha ahaatee, 5 sano kadib wuxuu isku bilaabay filim, Palla al centro. Dhibaatadu waxay tahay guushii uu aabbihii ku lahaa laguma soo celin isaga, filimkiina lama dareemin, sidaa darteed Federico Moccia waxay go'aansatay inay beddesho shineemada telefishanka, wax uu hore u samayn jiray sannad ka hor, halkaas oo uu uga qaybgalay qoraa -shaashadda xilli -ciyaareedkii koowaad ee Wiilasha 3 -aad. 1989 wuxuu ahaa agaasime iyo qoraa qoraha Colegio kanna wuxuu lahaa xoogaa guul ah.
Sidaa darteed, wuxuu bilaabay inuu isku daro telefishanka, qorista qoraallada barnaamijyada guuleysta, iyo sidoo kale shineemada.
Hadana sidaas oo ay tahay, Federico Moccia waxay waqti u sameysay buugaagtiisa. Waxay ahayd 1992 markii uu dhammeeyey qorista Saddex mitir oo cirka ka sarraysa, taas oo noqon doonta sheekadiisii ​​ugu horreysay. Iyo, sida ku dhacday qoraayaal badan, waxay lahayd dhibaatooyin ku filan daabacaha kasta si uu go'aansado inuu ku aamino. Markaa wuxuu qaatay go'aanka ah inuu isagu iska daabaco daabacaha yar. Intii lagu jiray noocaas, buuggu ma uusan bixin, Moccia wuxuu xoogga saaray shaqadiisa shineemada, iyadoo filimka Mixed class 3ª A. Mar labaad aan lagu guuleysan.
Wuxuu ku soo noqday telefishanka laakiin, 2004, waxay ahayd inuu ka tago markii buugiisii ​​ugu horreeyay wuxuu bilaabay inuu soo baxo ka dib 12 sano oo la daabacay. Taasi waa in la yidhaahdo, guushaas ayaa isaga u timid, isaga oo ifafaale ka ah dugsiyada sare ee Roomaanka, halkaasna looga tarjumay dhawr luqadood oo lagu daabacay dalal kala duwan sida Yurub, Japan, Baraasiil ... Isla sannadkaas buugga sidoo kale waxay la qabsatay shaneemada, isla markiiba waxay ku caan baxday, oo waxay sii kordhisay sheekada.
Dabcan, waqtigaas Federico Moccia wuxuu u jeestay dhankiisa suugaaneed, wuxuuna nasiibkiisa ku tijaabiyay sheeko -wadaag labaad, waxaan kuu hayaa rabitaan, taxane u ah sheekooyinkiisii ​​ugu horreeyay, iyo isla guushii kan tan, la -qabsiga ayaa ku jiray.
Labadaas buug waxay ahaayeen bilowgii ifafaalaha Moccia, kuwa soo socda ee soo baxay ayaa mar kale guulaystay ilaa maanta.
Buugaagta Federico Moccia
Haddii aad rabto inaad akhriso buugga Buugaagta Federico Moccia siday u kala horreeyaan, markaa halkan ayaanu uga faaloonaynaa si aanad waxba u seegin. Maskaxda ku hay in badankoodu ay ka yimaadeen sagas, taas oo ah, waxay ka kooban yihiin ugu yaraan laba buug. Markaas wuxuu leeyahay xoogaa madax -bannaan, in kastoo aan si fiican loo aqoon.
Saga Saddex mitir oo cirka ka sarreeya
Wuxuu ka kooban yahay dhowr buug: "Saddex mitir oo cirka ka sarreeya", "waan ku doonayaa", "Saddex jeer adiga", "Babi iyo aniga".
Tan dambe dhab ahaantii waa sheeko, ma aha sheeko cusub, laakiin waxay u dhigantaa sheekada iyo jilayaasha ka muuqda sheekadan.
Sheekadu waxay ina baraysaa koox asxaab ah, oo leh shaqsiyadooda iyo maritaankooda qaangaarnimada ilaa qaangaarnimada, iyagoo isku dayaya inay helaan booskooda adduunka. Halyeeyada ayaa ku nool sheeko jacayl qaabka Romeo iyo Juliet ee ugu saafi ah, laakiin casri ah.
Saga Waan ka xumahay haddii aan kuugu yeero jacayl
Ka kooban laba buug, "Waan ka xumahay haddii aan kuugu yeero jacayl" iyo "Sorry laakiin waxaan rabaa inaan ku guursado." Waxay ahayd mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee qoraaga runtiina waxay tahay in dad badan ay uga roon tahay sheekooyinkiisii ​​ugu horreeyay.
Waxaa jira buug saddexaad, "Si aad ah u Raadinaya Nikki", laakiin looma tarjumin Isbaanish oo kaliya taageerayaasha saga ayaa og jiritaankiisa.
Sheekadu waxay ka hadlaysaa jacaylka ka dhexeeya lammaanaha leh farqiga da'da weyn iyo caqabadaha ay tahay inay ka gudbaan si ay ugu dambayn ugu farxaan, saaxiibbada, qoyska, iwm.
Saga Caawa ii sheeg inaad i jeceshahay
Wuxuu ka kooban yahay laba buug: "Caawa ii sheeg inaad i jeceshahay" iyo "Kun habeen la'aanteed."
Xaaladdan oo kale, jilaaga ayaa ah wiilka, Nicco, oo ay hadda iska tuurtay saaxiibtiis oo si lama filaan ah ula kulmay laba gabdhood oo dhallinyaro Isbaanish ah oo uu bilaabay inuu dareemo wax ka badan soo jiidasho. Ilaa ay ka baaba'aan.
Saga Xilligaas farxadda
Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay laba buug: "Farxaddaas farxadda leh" iyo "Adiga, adiga uun."
Buugga sheekada, wuxuu nagu barayaa laba xaraf oo waxoogaa ka duwan kuwa caadiga ah, maadaama jilaagu yahay mid ka mid ah ragga ugu taajirsan adduunka gabadhuna waa piano prodigy. Laakiin wax ayaa dhacaya oo ka dhiga waddooyinka labada is -gooya.
Sidaan soo sheegnay, buugaagta Federico Moccia wuxuu kaloo leeyahay qaar kale oo madaxbannaan, taas oo ah, waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad. Kuwani waa:
Socodka. Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah sheekooyinkii ugu yaabka badnaa ee qoraaga, mar haddii aannaan u baran diiwaangelintan. Waa sheeko -gaaban oo uu ka tarjumayo geeridii aabihii.
Carolina jacayl bay ku dhacdaa. Jilaaga sheekada waa 14 jir, waa gabar sida kuwa kale. Ilaa uu ku biiro koox gabdho ah oo dhigta dugsiga sare iyo xafladaha, dhunkasho, saaxiibtinimo iyo caadooyin iyo jacayl dhab ah ayaa bilaabmaya.
Miyaad wax akhriday Federico Moccia? Keebaa aad ugu jeclayd qoraaga? Aan ogaano!
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Federico Moccia: buugaag
Emilio Lara. Wareysi lala yeeshay qoraaga Sentinel of Dreams